Unxibelelana njani neNgelosi yakho enguMgcini? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Iingelosi zethu eziGciniweyo zihlala zisecaleni kwethu kwaye azize zisiphoxe kulo naliphi na inqanaba ebomini bethu. Eneneni, nanini na sinengxaki, okanye sifuna ukhokelo, sinokusoloko sibhenela kuyo. Ngaphandle kokubabona ngokoqobo, bahamba nathi yonke imihla yaye basoloko bekulungele ukumamela iingxaki zethu. Bahlala bekulungele ukusithuthuzela kwaye basincede, kwimeko yokuba siyakholelwa kubo kwaye sifunde indlela yokunxibelelana nabo ngokufanelekileyo. Nanga amanyathelo aphambili endlela yokufowuna kwaye uvulele umkhuseli wakho wokomoya.
Ndingamamela njani into ethethwa yiNgelosi yam enguMgcini?
Iindlela ezi-3 zokubiza oomoya abaphezulu
Ukuqonda imiyalezo evela kumagunya aphezulu
Njengabathunywa phakathi kweZulu noMhlaba, Iingelosi zikhona kubuYuda, ubuKristu kunye nobuSilamsi. Ukususela ekuqaleni kwexesha, siye sababiza ukuba basincede sikhulule iintlungu zethu kwaye sibeke iintlungu zethu kubo. Ngamnye kubo ufuzisela ixabiso okanye amandla abanokuthi basikelele ngawo ama-protégés abo.
Kufuneka wenze ntoni ukuze uve iNgelosi yakho enguMlondolozi?
Ukuze uphulaphule kwaye uqonde into abayithethayo, kufuneka uvule ingqondo yakho. Ukuba uyabubamba ubomi kodwa ngokwembono engqingqwa, akunakufane uva ilizwi leNgelosi yakho enguMgcini. Ewe, izikhokelo zethu zomoya ayizozidalwa esinokudibana nazo kwihlabathi lenyama, ke ukuze uve, kufuneka uzibeke kwindawo yobuthixo ngakumbi, ngaphandle kweziphazamiso zangaphandle. Ukunxibelelana nabantu abaphezulu kulula kwabo basetyenziselwa ukucamngca nokuphulaphula ilizwi labo langaphakathi.
Iindlela ezi-3 zokunxibelelana kunye nokubiza iNgelosi yakho
Okokuqala, kufuneka wazi igama lengelosi yakho enguMgcini. Emva koko, ngamnye wethu unokunxibelelana naye isikhokelo sokucela ingcebiso okanye ukuxelela amathemba ethu okanye uloyiko lwethu. Ukuze sinxibelelane namagunya aphezulu, kufuneka sithethe nje ngentliziyo evulekileyo. Ungathetha nabo ngokuthula okanye ngokuvakalayo, akunamsebenzi. Nangona kunjalo, izikhokelo zethu zomoya zizidalwa eziphezulu kwaye ukutsala ingqalelo yabo akukho lula. Ukuba awuphumeleli, eyona ndlela yokunxibelelana ne-a phakathi onokuthi abe ngumthetheli.
Unokubabuza nantoni na ukuba nje ungabaniki imiyalelo okanye wenze izinto ezinokuthi zenzakalisa abanye.
1 Umthandazo yeyona ndlela yokunxibelelana
Apha, kufuneka ukhethe indawo ezolileyo neyokuphumla. Kungcono ukuthandaza kubo ngaxeshanye, nakwindawo enye. Ukwenza imithandazo yakho isebenze ngakumbi, jikela eMpuma. Eli licala apho ilanga liphuma khona, ngoko ke amandla aphilileyo akhona ngakumbi apho. Cima ifowuni yakho ukuze uqiniseke ukuba akukho mntu uza kukuphazamisa ngeli xesha lonxibelelwano. Unako kwakhona isiqhumiso esikhanyayo, nekhandlela elikrolwe kuyo igama lesithunywa sezulu. Ukuba umkhuseli wakho akakubonisi naziphi na iimpawu zobukho, ungalibazisi ukuvumela ikhandlela livuthe kude kube ngentsasa elandelayo.
- Hamba kuhambo kwaye ufunde malunga indlela yokwenza uqikelelo lwakho lwe-astral -
Qhagamshelana nePsychic ukunxibelelana namagunya aphezulu
2. Zama indlela yokucamngca
Khetha indawo ezolileyo ekhayeni lakho okanye ngaphandle, hlala phantsi, khulula ingqondo yakho kwaye uphefumle ngokunzulu. Cinga ngomoya ongena emzimbeni wakho kwaye ugcwalise imiphunga yakho. Gxininisa kumalungu ahlukeneyo omzimba wakho. Cinga ngelungu ngalinye ngokuzimeleyo kumzimba wakho wonke (inzima kancinci kwaye ifuna ukuziqhelanisa). Emva koko, xa sele ukhululekile ngokupheleleyo, zama ukujonga umphefumlo wakho. Eli lixesha apho kuya kufuneka cinga kakhulu ngesikhokelo sakho somoya ngokuphinda igama labo. Ukuba bathatha isigqibo sokukuphendula, uya kuqaphela ngokukhawuleza.
3. Ukubhalela iNgelosi yakho enguMgcini
Kwimeko yengxaki ekhoyo unako bhalela iNgelosi yakho ileta. Le leta kufuneka ibhalwe kwiphepha obhale kulo umhla kunye namagama abo. Emva koko, kufuneka uchaze into esengqondweni yakho kunye nento oyifunayo ... Vumela intliziyo yakho ikhokele usiba lwakho uze ugqibezele ileta yakho ngokubulela umkhuseli wakho ngongenelelo.
Ukuthumela ileta yakho, yibambe ukusuka ezantsi, ngaphezulu kwesinki, uze utshise umphezulu wonobumba ukusuka ekhohlo ukuya ekunene kwaye uyivumele ibambe umlilo ngaphambi kokuba uyiwise ngomzuzu wokugqibela. Linda impendulo yabo. Ukuba emva kwexesha abakakuphenduli , kusenokwenzeka ukuba usukelo lwakho alufanelekanga. Ngokuhlala uthule, uya kuqonda ngokukhawuleza ukuba awukho kwindlela elungileyo kwaye kufuneka ukhokelwe kwenye indawo.
-Fumana i imithandazo ukubulela Angel yakho Guardian -
Iimpawu ezibonisa ukuba uyaqhagamshelwa
Ukuze uqonde iimpendulo zabo kwiifowuni zakho, imibuzo kunye nemibuzo, kusafuneka ukuba batolike imiyalezo abayithumelayo nawe kunye nokuqonda indlela abafikelela ngayo kuwe.
1. Uqala ukubona amanani eNgelosi
Ukuba ngexesha losuku lwakho, uhlala ubonaAmanani eengelosi kunye neeyure zesipiliezifana no-444 555 njl. njl., yazi ukuba oku akwenzekanga nje, kodwa ngokwenene amagunya aphezulu ndizama ukukuxelela into.
2. Uhlala ufumana ukungcangcazela
Ngaba ukwimo entle kodwa rhoqo ukuza phezu kwengqele kwaye uqale ukungcangcazela? Luphawu lobukho beNgelosi yakho. Ngokufuthi ngakumbi, oku kungcangcazela kwenzeka kwindawo engcwele, xa kufuneka senze isigqibo esinzima okanye xa kuza kwenzeka isiganeko esingathandekiyo.
3. Isilo-qabane sakho siziphatha ngendlela engaqhelekanga
Iimvakalelo zezilwanyana ziphuhliswe kakhulu, banomdla ngakumbi kumandla. Yiyo loo nto ukuba isilwanyana sakho sasekhaya senza ngendlela engaqhelekanga, mhlawumbi kungenxa yokuba sibona ubukho obutsha.
Bala inombolo yakho yobuqu AngelApha.
Musa ukuma apho, d fumanisa i Iimpawu ezili-10 zokuba undwendwelwe yiNgelosi yakho enguMgcini .
Kutheni ungacingi eyakho Igama lengelosi enkulu kwaye ufunde ngakumbi ngabo.
Ubuntu bukaLeo: Yonke into obusoloko uphupha ngokuyazi
INyanga epheleleyo nge-31 ka-Okthobha: Zikhulule Phantsi kweNyanga eBlue
U-Aniel, iNgelosi engumGcini we-Audicious kunye nabantu abazimiseleyo
Esona sinxibo soyikekayo se-Halloween kuphawu ngalunye lwe-Zodiac
Yeyiphi imiqondiso yeZodiac emi-5 ngabaphulaphuli abagqwesileyo?
Ngubani umqondiso wakho weZodiac ongahambelaniyo naye ngokwesondo?
Ukubona iyure ye-15: 51 ebuyiselweyo yeMirror ngumyalezo wokufumana inkululeko yakho
Ezi zezona zibonakaliso ze-5 ezininzi ze-Charismatic Zodiac
UYabamiah Guardian Angel; Uphawu lokwenyani lweAlchemy kunye noTshintsho
I-horoscope yeveki yeTaurus
UAnauel Guardian Angel: Uphawu lwenkalipho kunye noBukhosi